Khatarta dawooyinka iyo waxyeelladooda - W/Q: Ridwaan Mubaarik Cabdi - Somaliland Post
Home Caafimaad Khatarta dawooyinka iyo waxyeelladooda – W/Q: Ridwaan Mubaarik Cabdi
Khatarta dawooyinka iyo waxyeelladooda – W/Q: Ridwaan Mubaarik Cabdi
Dhibaatada jirta ayaa ah in dawooyinka qaar ay faceenu u qataan siyaabo kala duwan oo kabaxsan dariiqooyinkii saxda ahaa ay yihiin kuwo saameyn laxaad leh ku haysa saxadii caafimaad ee da’yar badan oo manta jeclaan lahaa in sidoodii hore ay ku soo noqdaan alle haku soo celiyee.
Aqoon daridu maaha adigoon waxba aqoon ee waa adigoo u haysta shay si aanu ahayn waayo waxaad rabtaa inaad raali geliso naftaada si aad u hesho xasilooni iyo jidh kaamil ah oo isku dhan, adigoo adeegsanaya dawooyin aan kugu habooneyn una adeegsanaya sifo aan habooneyn.
Isbedelka ay daawadu abuurto ayaa noqon kara xalka keliya ee lagaga hortagi karo ama layskaga daaweyn karo xanuunada iyo waxa keenan, taasina waa mid isugu soo biyo-shubanaysa in shaqada daawadu ay noqoto laba arrimood mid uun oo kala ah;
Mid loo isticmaalayo xanuun baabiye ahaan <Antipain>
Mid loo isticmaalayo in lagu burburiyo xanuunkeenayaasha <Antibiotic>
Hadaan si kooban u soo kala qaadano inagoo shaxar kooban midkiiba ka bixinayna
1. Mid loo isticmaalayo xanuun baabiye ahaan <Antipain>
Xanuun baaabiyuhu waa isku dhis kimikeed oo ka kooban 2-20 animo acid oo isku haysta dabaro kala duwan oo ka kooban hal ilaa afar dabaro iyagoo isku haysta qaad shabeg oo kale, Bakteeriyadan loo isticmaalo in laga sameeyo dawooyinka xanuun baabiyaha ayaa ah mid daqad ahaan lagu tiriyo dabaqada Genus oo ah astaan ay wadaagan bakteeriyada qaarkooda loona nisbeeyo in ay yihiin laan dheerayaasha bakteeriyada marka laga yimaado family< qoysaska bakeeroyadu ka kooban tahay>
Qaab dhismeedka kimikeed ee ay ka kooban yihiin xanuun baabiyayaashu waa kuwo isku haysta qaad silsiladeed ahaan oo ay adag tahay sida logu soo kooba, lakinse ujeedadaydu waxay tahay in aan irbad carded ka iftiimiyo waxay yihiin xanuun baabiyayashu iyo in waxqabad koodu yahay mid inta badan loo isticmaalo kaar jabin siday shaqadoodu tahay. Kaar jabiyayasha waxa loo qaybiyaa dhawr nooc iyagoo loo eegayo hadba heerka ay taagan tahay xumado iyo nooca ay xumado tahay labadaba.
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee kaar jabiyayashu waa kuwo abuura waxyeelooyin raad kaga taga xubnaheena qaarkood, waxaana caado noqtay in dadkeenu ay qabtimeen dawooyinkan sida daruuriyaadka oo kale, dawooyinka ugu badan ee aynu isticmaalnaa waa kuwo bar bilow ka ah inta badan xanuunada laga cawdo ee ku dhaca beerka iyo kelyaha.
Dawooyinkaasna waxa ka mid ah;
Sedexdan kiniin ba waa kuwo loo isticmaalo kaar jabiyayaal, noocyo ka mid ah madax xanuunka, xubno garaaca iyo ilko xanuunka, isticmaalka joogtada ah ee xanuun biyayaashan ayaa ah mid raad kaga tagta xubnaheena, waxaaana ka mid ah;
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinkani waa kuwo kordhiya dhaawaca ku imaada xubnaha dheecanka ee caloosha soona daaya dheecanada wax dheefshiida ee laga helo afka hore ee mindhicirka yar taasina ay keeni karto dhiig ku sameysma caloosha iyo mindhicirad dhexdooda.
Inay dhawaac gaadhsiyaan xubnaha gaarka ah ee beerka iyo kelyaha, taaso laga yaabo inay ka dhalato sumow aan ka imanayn dhinaca daawada laakinse ay keenayso burburinta xaad-dhaafka ah ee daawda iyadoo markasta loo isticmaalayo dheecanada wax dheefshiida ee afka qalaad lagu yidhaahdo loona soo gaabiyo NAPQI<N-acetyl-p-benzoquinoneimine>
Xanuun baabiyaashani waa kuwa ugu saameynta badan ee hawl gabka ka dhiga beerka taaso ay sababto abuurida suntan ka dhalata burbruinta dawooyinkan oo la yidhaahdo afka qalaad <Hepototoxicity> kaasoo ah sumowga ugu cansan ee sababa xanuunada ku dhaca beerka.
2. Mid loo isticmaalayo in lagu burburiyo xanuunkeenayaasha <Antibiotic>
Daawooyinkan loo yaqaano antibiotics ama antibacterial<lidka bakteeriyada> waa daawooyin loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurada ay keenana bakteeriyadu si loo xakameeyo cudurada ya keenayso ama loo dabar jaro sida xanuunada xabada, jabtida iyo TB.
Ka hor intaanay bakteeriyadani tarmin muujina wax astaamo ah waxa burburya habdhiska difaaceena laakinse hadii bakteeriyadani ka badato xadigeeedii hore ama la wada burburin kari-waayo waxa markaa loo baahanayaa kalkaaliyayaal lid bakteeriya ah oo kaaba hab dhiska difaaceena. Hadaba noocyada lidka bakteeriyada ayaa ah mid loo isticmaalo marxalado kala duwan iyadoo loo eegayo hadba nooca ya bakteeriyadu tahay, mudada ay qaadanayso in bakteeriyadaa la burburiyo iyo nooca xanuunka ay keento.
Lidka bakteeriyadu waa dawooyin waxtarkoodu ka yar yahay faa’iidadooda hadii aanay jirin wax dhakhtar ah oo lala tashaday, hadaan ku dhaafno dawooyinka lidka bakteeriyada iyadoo uu adeegsigeedu uu yahay mid loo isticmaalo siyaabo badan oo aan lasoo koobi karayn waxa isweydiin muddan maxay yihiin waxyeeladoodu hadii la dhaafiyo ama lagu talax tago isticmaalkooda dhakhtar la’aan?
Hadaan si kooban ugu muujino waxyeeladooda shaxankan waxay tahay;
Abla-ablaynta lidka bakteeriya(antibiotics) Noocyada lidka-bakteeriyada Saameyntay geestaan
Penicillin Penicillin, amoxicillin, amoxicillin-clavulanate, ampicillin, oxacillin iyo kuwo kaloo badan oo ka mid ah noocyadan antibiotic. Bog-xanuun, matag yilaalugo wata iyo xasaasiyad.
Cephalosporius Cephalexine, ceftriaxone, cefuroxime, cefixime iyo kuwo kaloo badan oo ka tirsan noocyadan. Shuban iyo noocyo ks mid ah xasaasiyada ku dhacda meelo kala duwan oo ka mid ah xubnaheena.
Amino glycosides Gentamicine, tobramycin iyo kuwo kaloo badan oo ka tirsan noocyadan. Sumowga kelyaha ku imaada, dhagaha oo ay ka lumo maqalku
Tetracycline Tetracycline, doxycycline, minocycline, iyo kuwo kaloo badan oo ka tirsan noocyadan. Shuban, yilaaligo, bog-xanuun, beer sumow, iyo ilkaha oo ay ka lumaan dheehoodu.
Quinolones Ciprofloxine <cipro>, levofloxacine, moxifloxacine, ofloxine Hurdo la’aan, madax xanuun, iyo shuban.
Sulfonamide Sulfamathoxazole, erythromycin, sulfadiazian Hindhiso fara badan, shuban , madax xanuun.
Hadaba hadii radadkani ahaadaan kuwo ay sii jirto waxyeladoodu waxa ka dhasha;
Isticmaalka lidka-bakteeriyada kuwooda loo yaqaano amoxicillin- clavulanate, ampicillin, iyo cefixime iyo kuwo lakaloo badan oo ka mid ah kooxdan waa dawooyin saameyntoodu noqoto in ay keenan shuban xadhaaf ah oo loo dhiman karo.
Halka ay kuwo kale oo ka mid ah dawooyinkan ay caawiyaan koritaanka iyo taranka bakteeriyada qaarkood oo khatar badan keentana noocyo kamid ah infakshan<infection> waxaana bakteeriyadaa afka qalaad loo aqanaa <Clostridium dificile>
Dhinaca kale dawooyinkani waa kuwo saameyn ku yeesha macdanta dumarka , taasoo ugu danbeyn ay ku keento infakshan<infection> ilaa inta ay joojinayso ama ay dhakhtar la tashanayso.
Hadaan inta ku soo gunaanadno labada qaybood ee daawooyinka intooda badan loo qaybiyo iyo waxyeeladooda, taas oo aan u arkay inay muhiin tahay in aan isaga digtaan waayo waxyeelada ku gaadhaa waa mid damqashadeedu markasta ay nagu mudan tahay. Waxaan walaalahayga soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan uga digayaa isticmaalida dawooyinka aan habooneyn in loo isticmaalo sifooyin kale ama aanad kala tashay wax dhakhtar ah.
Waxa hubaal ah in dawooyinka qaarkood ee ay da’yar badani isticmalaan ay yihiin mid ay sii kordhayaan waxyeeladoodu kuna wayeen shababnimadoodii , waana wax laga damqado oo saameynteedu inaga maqan tahay, dawooyinkan waxa ka mid ah daawada ugu isticmaal badan ee ay dhalinteenu isku naaxiso mar ka kaga yimaado big-power, 9 vitamin.
Daawadana waxa la yidhaahdaa Dexamethasone ;
Waa isku dhis kimikeed oo laga sameeyo dheecan laga soo tuujiyey qanjidho laga dul helo kelyaha dushooda ama xaadh yar oo dahaadh u ah qanjidhaka kelida laga dul helo sida ay yidhaahdeen culimo ku xeel dheer shaybaadhka dawooyinka. Waa daawo loo isticmaalo in lagu daaweeyo xasaasiyad , noocyo kamid ah xiiqda iyo xanuuni kale , waana daawo ay ku jirto hurdo yar kana kooban dhawr dawooyin oo isku jira.
In uu hawl gab noqdo hab-dhiska dheefshiidku waxaanu ugu danbeynta keena nabar ku saameysma caloosha.
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinkani waxay keenan in ay yaraato qarada laftu leedahay taaso ugu danbeyn keena cudurada ku dhaca lafaha ee la yidhaahdo Osteoporosis.
Waxay waxyeeleysaa nidaamka wax burburinta ee macdanaha , waxayna ugu danbeynta keentaa in ay kugu bataan macdanaha qaarkood sida milxda, calcium , potassium jidhkeena kuna keeni karaan xanuuno aanu ugu dayacnaan karno sokorowga.
Waxaa ka dhasha inay waxyeelaan hab-dhaqanka nafsi ahaaneed , taaso ka dhalata cadaadis badan oo ay daawadu ku abuurto maskaxda iyo madax xanuun badan.
Ugu danbeyntii waxay dawooyinkani sababan cadaadis ku imaada dareeraha isha iyo wareegooda. Waxaanay sababan caadka isha ku sameysma.
Guntii iyo gebo-gabadii waxaan qoraalkaygan gaaban kusoo af meerayaa qodobadan aan u arkay inay dhibaatooyinkan u noqon karaan;
Iska ilaali inaad dawooyinka u isticmaasho si xad-dhaaf ah adigoon dhakhtar la tashan ama aanad aqoon u lahayn.
Iska ilaali in aad hubsiimo dari ku geyso daawo aanad garanayn wax loo isticmaalo adigoon ka dayaya ujeedooyin kale.
Iska ilaali in aad la isticmaasho qof daawo aan khuseyn xanuunkaaga ama marxaladaada caafimaad.
Iska jir inaad jidhkaaga ka dhigto mid la qabatimay daawooyinka waayo waxaad ka dhaxli kartaa dhibaatooyin aanad ka soo waaqsanayn.
Ka digtoonow inaad noqoto qof u nugul daawooyinka waayo markasta shardi maah in aad isticmaasho daawooyin markaad xanuusato.
Allaa Mahad Leh…
W/Q: Ridwaan Mubaarik Cabdi